Google Waxay U Baahan Tahay Dhamaan Shaqaalaha Kusoo Laabanaya Xafiiska In La Tallaalo
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Safarka » Google Waxay U Baahan Tahay Dhamaan Shaqaalaha Kusoo Laabanaya Xafiiska In La Tallaalo
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Caafimaadka Warka • News • Dadka • Waajib ah • Technology • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan
Maamulaha Google Sundar Pichai
Google waa shirkadda ugu weyn ee gaarka loo leeyahay illaa iyo hadda inay shaqaalaheeda ka dhigto tallaalka COVID-19.
Qof kasta oo u imanaya inuu ka shaqeeyo xarumaha Google wuxuu u baahan doonaa in la tallaalo.
Siyaasadda waxaa lagu soo rogi doonaa Mareykanka toddobaadyada soo socda, iyo adduunka oo dhan ka dib.
Madaxweyne Joe Biden wuxuu yiri shuruudda tallaalka ee shaqaalaha federaalka Mareykanka "hadda waa la tixgelinayaa."
Shirkadda tiknoolajiyada ee caalamiga ah ee Maraykanka Google LLC ayaa ku dhawaaqday in dhammaan shaqaalaheeda ku soo laabanaya ka shaqeynta xarumaheeda ay tahay in lagu tallaalo tallaalka COVID-19.
Bilowgii masiibada COVID-19, Google waxay u dirtay inta badan shaqaalaheeda ku dhawaad ​​140,000 bishii Maarso ee la soo dhaafay si ay meel fog uga shaqeeyaan. Si kastaba ha noqotee hadda, xarumihii Google ayaa dib loo furayaa, shaqaaluhuna waxay ku laaban doonaan xafiisyada, laakiin KELIYA ka dib marka la tallaalo, ayuu CEO Sundar Pichai u sheegay shaqaalaha Google email ay maanta soo direen.
"Qof kasta oo u imanaya inuu ka shaqeeyo xarumahayaga wuxuu u baahan doonaa in la tallaalo," ayuu qoray Pichai, isagoo raaciyay in siyaasaddan laga hirgelin doono Mareykanka toddobaadyada soo socda, iyo adduunka oo dhan ka dib.
Shaqaalaha aan doonayn inay ku noqdaan shaqada qof ahaaneed waxay awoodi doonaan inay ka shaqeeyaan guriga ilaa bisha Oktoobar, ayuu sii raaciyay, shirkaddu waxay kaloo u oggolaan doontaa shaqaalaha qaarkood inay ugu horrayn ka shaqeeyaan guriga ilaa dhammaadka sannadka.
Google waa shirkadda ugu weyn ee gaarka loo leeyahay ilaa hadda inay ku qasabto tallaalidda shaqaalaheeda, laakiin dowladda Mareykanka oo dhan ayaa laga yaabaa inay dhowaan raacdo ku dayasho.
Go’aanka Google ayaa ku soo beegmaya iyadoo Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu ka fiirsanayo tallaalada khasabka ah ee dhammaan shaqaalaha federaalka.
Biden wuxuu wariyeyaasha u sheegay Talaadadii in shuruudda tallaalka ee shaqaalaha federaalka “hadda la tixgeliyo,” warbixinnada warbaahinta ayaa sheegaya in ku dhawaaqista mowduuca ay imaan karto horaanta Khamiista.
Labadaba Biden iyo Google ayaa sida muuqata awood u leh inay ka codsadaan shaqaalahooda inay jabiyaan. Dib -u -eegis ay samaysay Waaxda Caddaaladdu waxay soo gabagabaysay toddobaadkan in hay'adaha gaarka loo leeyahay iyo kuwa dawliga ahiba ay shaqaalaha ku amri karaan inay is -tallaalaan.
Google, si kastaba ha ahaatee, waxay xafiisyo ku leedahay 50 dal oo adduunka oo dhan ah, caqabadaha sharciga ee ka dhanka ah waajibaadka tallaalka ayaa lagu dhejin karaa meelahaas qaarkood. Iimaylka Pichai wuxuu xusay in waajibaadka “uu ku kala duwanaan doono xaaladaha iyo xeerarka maxalliga ah,” in kasta oo aan faahfaahin dheeraad ah la bixin.
Wax yar ka dib bayaankii Pichai, Netflix waxay ku dhawaaqday inay u baahan doonto dhammaan jilayaasha ka shaqeynaya wax soo saarkiisa Mareykanka, iyo shaqaalaha xiriirka dhow la leh, in la tallaalo.